यी कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्रीबाट ठगिए जनता ! अन्ततः भयो पर्दाफास::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री निर्वाचन भएपछि युवाले रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने र स्वदेशमै रोजगारी दिने बताएका थिए ।
तर अहिले जनता ठगिएका छन् । अब उनकै नेतृत्वको सरकारले युवालाई विदेश पठाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसरी मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको जनता ठग्ने हर्कतको पर्दाफास भएको छ ।
बेरोजगार युवालाई विदेसिनबाट रोक्न केन्द्र सरकारले देशमै रोजगारी दिने योजना सञ्चालन गर्दैगर्दा सुदूरपश्चिम सरकार भने विदेश पठाउन विभिन्न देशका भाषा सिकाउँदै छ । प्रदेशका नौवटै जिल्लाका तीन सय २० युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जापानी, कोरियन र अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
‘केही दिनमै भाषा कक्षा सुरु हुन्छन् । प्रदेश सरकारको रातो किताबमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले भने । बजेटमा समावेश गरिएका स्वरोजगार बन्न टेवा र्पुयाउने कार्यक्रम भने आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीले उद्योगको विकास र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सरकारले गर्न नसकेको बताए । युवाहरूलाई विदेश पठाउन उत्प्रेरित गर्नुभन्दा सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘युवालाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारालाई नै व्यंग्य गरेको छ,’ उनले भने । देशमै होटेल, उद्योग, सडक कालोपत्रेलगायत क्षेत्रमा कामदारको अभाव रहेकाले पूर्तिका लागि बेरोजगार युवालाई सीपमूलक तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पहिले यहीँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्‍यो । विदेश नै पठाउने हो भने दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ,’ बोगटीले भने, ‘अदक्ष कामदारका रूपमा लाखौं नेपालीले विदेशमा सस्तोमा श्रम बेच्नुपरिरहेको छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
‘विदेश काम गर्न जाँदा भाषा पनि महत्वपूर्ण हो, तर सीप त्योभन्दा मुख्य हुन्छ । किनभने सीप सिकेर गए काम र तलब दुवै राम्रो पाइन्छ,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘तर, अदक्ष कामदारले सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिम सरकारले स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको बजेट भने फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेशमा स्वरोजगार कोष स्थापनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब विनियोजन गरेको थियो । कोष सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नै नबन्दा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको हो ।
प्रदेशमा स्वरोजगार कोष गठन हुन सकेको छैन । सीप भएको जनशक्तिलाई विनाधितो ऋण तथा बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम दिन सरकारले स्वरोजगार कोष गठन गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको थियो ।